विवाहित महिलाहरुले आफ्नो पति हुँदाहुँदै प’रपुरुषसँग किन अवैध स-म्बन्ध राख्छन् त ? प्रश्न निकै ज’ टिल छ । कुनै पनि प’रपुरुषसँग शा’रीरि क स-म्ब न्ध राख्ने इ’जाजत हाम्रो संस्कृतिले दिँदैन ।
तर पनि कतिपय महिलाहरु प’र परुषसँग आ’कर्षित हुने गरेको पाइन्छ । यसको कारण व्यक्तिगत रुपमा फरक-फरक हुनसक्छ । त्यसमा पनि मुख्यतया पाँच कारण नै बढी जिम्मेवार हुने गरेको पाइन्छ ।
पुरुषहरु प्राय: काममा व्यस्त हुने भएकाले घरबाहिर नै रहन्छन् । उनीहरुले पत्नीलाई पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् । अझ हाम्रोजस्तो मुलुकमा त हजारौँ युवा विवाह गरेर विदेशिएका छन् । यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म उनीहरुबीच भेटघाटसमेत हुँदैन । यता पत्नीहरुलाई भने ए’क्लोप नाले स’ताउन थाल्छ । यौ’ न चा हना पनि विस्तारै बढ्दै जान्छ । अनि नचाहेरै पनि उनीहरुमा विकल्पको सोच उत्पन्न हुन्छ ।
बढी उमेरको वा मन नपरेको जीवनसाथी
हामीकहाँ विवाह अझै पनि आफूलेमात्र चाहेर हुने अवस्था छैन । त्यसमा परिवारको पनि स्वीकृति अनिवार्य मानिन्छ । अझै धेरैले त बाबुआमाले खोजेको वा अभिभावकले मात्र मन पराएको केटासँग विवाह गर्छन् । यस्तो अवस्थामा जीवनसाथी आफूले चाहेको र मनपराएको जस्तो नहुन सक्छ । कतिपय बढी उमेरका हुने गरेको पाइन्छ भने कतिपयको रुपरंग मन नपर्ने खालको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा पत्नीहरु पर-पुरुषप्रति आ’कर्षित हुने जो’खिम बढ्छ ।
यौ* न स मस्या:
कतिपय पुरुषमा के पनि स मस्या हुन्छ भने उनीहरु आफ्नो पत्नीलाई यौ’ नस-म्ब न्धका दौरान पूर्ण स’न्तु ष्टि दिन सक्दैनन् । यसमध्ये केहीमा यौ- न सम स्या हुने गरेको पाइन्छ भने केहीले पा’र्ट नरको फि’लि ङ्सलाई ख्याल नराखी स’म्ब न्ध राख्छन् । यसले महिलालाई पू’र्ण स ’न्तुष्टि दिन सक्दैन । अनि उनीहरु प’र पुरुषप्रति आ’कर्षित हुन थाल्छन् ।
पश्चिमी समाज हाम्रो तुलनामा निकै उदार छ । त्यहाँ विवाह र स ’म्ब- न्धवि’ च्छेद निकै आमविषय हुन् । मन पर्दा स’म्ब न्ध जोड्छन्, नपरेको दिन छुट्टिन्छन् । यस्तो गर्दा पनि समाजले केही चासो राख्दैन । विवाह नै नगरी सँगै बस्दा पनि कसैको टाउको दु’ खाई हुँदैन । अहिले युवापुस्तामा त्यस्तो कल्चरप्रतिको आ’कर्षण निकै पाइन्छ । उनीहरु पनि त्यस्तै स्वतन्त्रता चाहन्छन् । जसले हाम्रो समाजमा ग-लत मानिने प’ रपु रुष स’ म्बन्धतर्फ आ’कर्षित गराउन भूमिका खेलिरहेको छ ।
प्राय महिलाहरु खर्चको मा’म लामा पुरुषभन्दा केही अघि हुन्छन् । त्यसो त खर्च गर्नुपर्ने ठाउँहरु पनि महिलाका लागि धेरै हुन्छ । स‌िंगारपटार, लुगाफाटो, गरगहना अनि वि’लाशि तामा महिलाहरुको विशेष चाख पाइन्छ । साथीसंगीहरु ठाँटिएर हिँड्दा र वि’लाशी जीवन बिताउँदा स्वभाविक रुपमा उनीहरुलाई पनि लो’भ्याउँछ । यस्तो अवस्थामा जब पतिले आफ्ना सानाभन्दा साना आकांक्षाहरु पनि पूरा गर्न सक्दैन, तब महिलाहरु प’रपुरुषतर्फ आ’कर्षित हुन्छन् ।
मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषले सुरुमै महिलाका यी ५ कुरामा ख्याल राखेको हुन्छ
कपालः- पुरुषले महिलाको सरीरमा सुरुमै ख्याल राख्ने एउटा अं’ग हो कपाल । पुरुषले निकै लामो कपाल मात्र मन पराउँछ भन्ने होइन । तर सफा, स्वस्थ तथा आकर्षक कपाल भएकी महिलाले पुरुषलाई आकर्षित गर्न सक्छिन् । भनिन्छ युवतीसँग आँखा जुधाइरहँदा युवकले ती युवतीको कपाल सुम्सुम्याइरहेको कल्पना गरिरहेको हुन्छ ।
मुस्कानः-के तपाइँको मुस्कान आँखा सम्मै पुग्यो ? अर्थात् तपाइँले मुखको मुस्कान सँगै आँखाबाट पनि सोही भाव व्यक्त गर्न सक्नुभयो ? मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषहरु महिलाको मुस्कान बनावटी हो की साँच्चिकै हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छन् । महिलाको ओठ तथा आँखाको भावको अध्ययन गर्न पुरुषहरु सक्षम हुन्छन् भनिन्छ ।
बोलीः-पुरुषहरु अलि सुरिलो बोली भएका महिलाहरु प्रति आकर्षित हुन्छन् । बोलिको पिच कम भएका वा धोद्रो आवाज भएका महिलाले पुरुषलाई आकषिर्त गर्न सक्दिनन् ।
कम्मर र ही’प-पुरुषले महिलाको कम्मर र हि’पको आकारमा विशेष ध्यान दिन्छन् । छिनेको कम्मर र चौडा ही’प भएकी महिला पुरुषको रोजाइमा पर्छिन् भनिन्छ।यसले महिलाको प्रज’नन क्षमता उच्च भएको संकेत समेत गर्छ ।
आँखाः-वास्तवमा आँखा पहिलो नजर पर्ने अं’ग नै हो । आँखाको आकार, नशा’लु पन, नानीको रङ, परेलाको बनावट लगायतका सबै कुराले महिलाको आकर्षणमा प्रभाव पार्छ र यो कुरामा पुरुषले विशेष ध्यान दिन्छन् ।
यो पनि- शास्त्र : यी १० लक्षण भएका नारीहरु हुन्छन सौभाग्यवती
जुन महिला मिठो वचन बोल्ने, उनको आवाजमा मधुरता र कसैलाई स्नेहि वाणीले व्यवहार गर्छिन् ।आस्तिक, सेवा भाव राख्ने, क्षमाशील, दानशील, बृद्धिमान, दयावान, र कर्तव्यको पालन गर्नै नारी लक्ष्मीको रुप हुन्छन् ।
जुन महिला तन भन्दा मन सुन्दर हुन्छ, अरुको दुखमा सहयोग गर्ने
घरमा भेदभाव बिना सबैको समान भोजन गराउने, जो दैनिक स्नान गरेर भान्छामा प्रवेश गर्ने
बिहान देवी–देवताको पुजा गर्ने, प्रतिव्रत धर्मका पालन गर्ने
धर्म र नीतिको मार्गमा हिड्न पारिवारीक सदस्यलाई प्रेरित गर्ने
प्रकाशित मिति March 7, 2021